कस्ता व्यक्तिले कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउन मिल्दैन ? - Sagarmatha TV
काठमाडौं- देशभर कोरोना संक्रमणविरुद्ध खोप अभियान जारी छ । खोप कस्तो व्यक्तिले लगाउने र कस्तो व्यक्तिले लगाउन नमिल्ने ? आमसर्वसाधारणमा अन्योलता छाएको छ ।
केही खोप केन्द्रहरूले उमेर मात्रै सोधेर खोप उपलब्ध गराउने गरेको समेत पाइएको छ । केही खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाएका सर्वसाधारणको विस्तृत विवरण नराखिएको देखिएको छ ।
– १८ वर्षभन्दा कम उमेर
– पहिलो मात्रा लगाएपछि गम्भीर एलर्जी भएमा
– उच्च ज्वरो आएको व्यक्तिले निको नहुन्जेल
– हाल (खोप लगाउने समयमा) गम्भीर बिरामी भएको
– संक्रमणमुक्त भएको ३० दिनअघि
– खोपको कुनै तत्वबाट गम्भीर प्रकारको प्रतिक्रिया भएमा
देशभर २६ हजार ६ सय ४७ जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, देशभर हाल २४ हजार ९९ जना संक्रमित होम आइसोलेसन र २ हजार ५ सय ४८ संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् । संस्थागत आइसोलसनमध्ये ५ सय ९९ जना आईसीयूमा र १ सय ७२ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले संक्रमितको संख्या कम भए पनि जोखिम कायम रहेको बताए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।